Fanapahana amin'ny famantarana ny olona ao amin'ny Google - sy ny loza | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 5, 2013 Alakamisy, Septambra 5, 2013 Douglas Karr
Namana tsara Brett Evans nitondra valin'ny fikarohana mahaliana tamin'ny saiko. Rehefa mitady ny olon-kafa Douglas Karr, ny tontolon'ny sidebar dia feno fampahalalana momba ilay mpamokatra sarimihetsika (tsy izaho), fa miaraka amin'ny sariko.
Ny zavatra mahavariana dia ny tsy misy fifandraisana eo amin'ny angona Wikipedia sy ny mombamomba ahy Google+. Tsy misy rohy ao amin'ny Wikipedia-ny izay misy ifandraisany amiko, tsy misy rohy ao amin'ny piraofiliko Google+ izay mifandray amin'ny pejiny Wikipedia… ka ahoana no nanapahan'i Google+ fa iray ihany izy ireo? (Nanana pejy Wikipedia aho taloha, saingy nofafan'izy ireo izany rehefa nanitsy ny sasany tamin'ireo vaovao diso aho.)
Mpanadihady SEO anay nanomboka kofehy momba izany tao amin'ny vondrona SEO azy tao amin'ny Google+ ary maro no naneho ny heviny momba ny Google manana algorithm disambiguation mahavariana… saingy mbola tsy nahomby teto. Tsy dia niahiahy loatra momba izany aho mandra-pahatongan'izany JC Edwards nametraka fanontaniana mampatahotra:
Soa ihany fa misy talen'ny sarimihetsika ity raharaha ity, inona no mety ho nitranga raha mpametaveta ankizy na mpamono olona izy ireo ary nasehon'izy ireo ny endrik'izy ireo?
Hevitra mampatahotra be izany! Ary toa hafahafa fa Google dia mihevitra ny famantarana ny olona iray fa tsy manamarina azy na manamarina azy fa olona. Ataon'izy ireo izany raha resaka raharaham-barotra, vokatra ary mari-pamantarana… tsy ho zava-dehibe ve ny olona? Mahita olana eo amin'ny faravodilanitra aho!
Tags: -mpamoronaampydouglas karrfanondroana googlegoogle searchvalin'ny fikarohana
Setup Authorship miaraka amin'ny Yoast's WordPress SEO